ကလေးငယ်များကို အိမ်နှင့်ကျောင်းတွင် ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်း အပါအဝင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း? - Yangon Media Group
ကလေးငယ်များကို နေအိမ်နှင့် စာသင်ကျောင်းများတွင် ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း မပြုရန် ငါးနှစ်တာစီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး ကလေးငယ်များ ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပါက လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဧပြီ ၂၇ ရက် လှည်းတန်းစင်တာတွင်ပြုလုပ်သော”ကလေးများ အပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက် မှုရပ်တန့်ဖို့ လူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော် မှုအစီအစဉ်”သို့တက်ရောက်လာသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကေသီကျော်ထံမှ သိရ ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက ကိုယ်တွေလည်း အရိုက်တော့ခံခဲ့ ကြရတာပေါ့။ စိတ်ဆိုးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ကောင်းစေလိုလုိ့ ဆုံးမကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါရဲ့ကောင်းကျိုးဆန္ဒ ဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ထက် လွန်မြောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဒေါသကိုဖောက်ထုတ်ဖို့ရိုက် နှက်ခြင်းတွေဖြစ်လာရင် ကလေးငယ်ရဲ့ အနာဂတ်ကိုထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီစီမံကိန်းဟာ တကယ်ကတော့ ကျွန်မတို့ အပြု အမူတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ တော် တော်အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လည်း ငါးနှစ်တာစီမံကိန်းအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်။ ပထမ ဆုံးသိပြီးသွားရင် ဒါကိုလိုက်လုပ် ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှရေရှည်မှာ အကျိုးရှိမှာပါ။ အဓိကကတော့ မေတ္တာထား ဖို့လိုတာပါ”ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကေသီကျော်က ပြောသည်။
ကလေးငယ်များညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်ခံရပါက တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက် သွယ်အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပြီး က လေးငယ်၏ လုံခြုံရေးနှင့် စားရေး၊ သောက်ရေးများကို ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကလေးသူငယ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာက အဓိကတာဝန်ယူထားတာက ကျွန်မတို့လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Hot Line နံပါတ်လေးတွေကို ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်။ နေပြည်တော်ကိုဆက်သွယ်ရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေကိုလည်း ချိတ်ဆက် ပေးပါတယ်။ ကျွန်မတို့တိုင်းရုံးကို ဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသွားပြီးတော့ ဖြစ်ရပ် စီမံခန့်ခွဲသူတွေကို လွှတ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေ လုပ်ပေးမှာပါ။ ဥပမာ ဒီကလေးကို ယာယီစောင့်ရှောက် ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်း ချက်ချင်း စောင့်ရှောက်ပေးသွားပါတယ်။
က လေးသည် မိသားစုနဲ့နေတာ အ ကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့်လည်း ကလေးအတွက် လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ယာယီဖြစ်စေ၊ ဌာနပိုင်ဖြစ်စေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ တစ်ခုက လူမှုဝန်ထမ်းကိုဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံးကာကွယ် ပေးမယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေပေးသလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ကျွန်မတို့ဌာန ကလုပ်ပါတယ်။ မှုခင်းပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ သက်ဆိုင်ရာဌာန (ပြည် ထဲရေး) ကလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံဖို့ဆိုရင် ကျွန်မတို့ဌာနက ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးသွားနေနိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်”ဟု ¤င်းကဆက် လက်ပြောသည်။
လာမည့်နှ.စ်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခြင်းမပြုတော့ရန် တရုတ်စီစဉ်နေ
မြန်မာနှင့် ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးသွားမည့် ” Lady Boy ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မိတ်ဆက??
လွှတ်တော် အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲများကို တိုင်းအစိုးရ ကန့်သတ်ခြင်းသည် ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုရ??